Ungawathelekisa njani amaxwebhu amabini eLizwi- iGeofumadas
Ngokuqhelekileyo kwenzeka kuthi, ukuba sisebenze kwidokhumenti, ngoko umntu uguqula ngaphandle kokumakisha utshintsho kwaye ngokukhawuleza okanye kamva senza ukuthelekiswa kwezi zibini.
Nangona kunjalo kunqabile Ndibhala ngezihloko zenkqubo yabantu nje abafayo, ndithatha eli thuba kuba lo msebenzi ubandakanyiwe kwiLizwi likaMicrosoft, kwaye uyayenza njengomtsalane. Zisuka nje, kuyacetyiswa ukuba omabini la maxwebhu aguqulwe abe yinguqulelo yedoksi kwimeko apho bekungenjalo, ukulungiselela ukuthelekisa phantsi kwezakhiwo ze-xml ezixhaswayo yile fomathi intsha.
Ukwenza inkqubo ofuna ukuya kuyo The lekisa, kwithebhu Uhlolo. Iphaneli ibonakala apho ukhetha uxwebhu loqobo kwaye loluphi uxwebhu lokugqibela kwaye egameni lakhe sinethemba lokuba utshintsho olufunyenweyo luya kuphawulwa.
Kukho inketho yokwandisa iphaneli ekuqwalaselweni kwento esilindele ukuthelekiswa ngayo; sinokukhethwa ukuba sifuna ukuphonononga utshintsho kwifomathi, ukunyakaza, utshintsho lweentloko, utshintsho kwiilayibhile, ekugqibeleni ...
Unokukhetha kwakhona ukuba utshintsho luphawulwe kwinqanaba lomgca okanye phawula igama elipheleleyo kwaye ke, ukuba silinde ukutshintsha okuphawulwe kwelinye lamaphepha okanye ezimbini.
Iziphumo zibonisa ngaxeshanye, ngokhetho oluphawulwe kwisangqa esingaphezulu, ngasekhohlo isiphumo sokujonga kwaye ngasekunene amaxwebhu amabini athelekisiweyo. Bona ukuba into eguqulweyo, isuswe okanye yongezwa iphawulwe ngemibala eyahlukeneyo; Iziphumo zokugqibela zingagcinwa njengoxwebhu olutsha olunezinto ezihlaziyiweyo eziboniswe kwi-hover okanye njengama-callout kwisahlulo esisekunene soxwebhu.
Kubonakala kum kumpawu ezintle zeLizwi esingazixhaphazi.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Indlela yokudlula iifayili kwi-Ipad kwi-PC
Post Next Indlela Yokuthatha I-Ipad ScreenOkulandelayo »
Impendulo enye kwi "Indlela yokuthelekisa amaxwebhu amabini eLizwi"
USergio N Hernandez uthi:
«Ndicinga ngeempawu ezintle zeLizwi esingafane sisebenzise zona»
Eyona nto ibonelela ngayo, ngokuqinisekileyo, sele sisisebenzisa i-Office 2010 kwaye yinto endiyisebenzisayo kakhulu. Ndiyicinga ukuba kuyimfuneko esisenza sibe nesisombululo.
I-Regards kwaye Wabelane ngePost
USergio N Hernandez